ဗိုကျခပျြပွီး ခါးသေးစဖေို့အတှကျ ၂၈ ရကျစာ workout plan - Lifestyle Myanmar
ဗိုကျခပျြပွီး ခါးသေးစဖေို့အတှကျ ၂၈ ရကျစာ workout plan
ဗိုကျသားခပျြခပျြရပျရပျနဲ့ ခါးသေးတာကို ပြိုမတေိုငျးမြှျောလငျ့တတျကွပါတယျ။ ပြိုမတေို့ရဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြတှကေို ပွညျ့ဝစဖေို့အတှကျ ထိရောကျပွီး ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ workout ပလနျတဈခုရှိပါတယျ။ ၂၈ရကျလောကျ ကွိုးကွိုးစားစားနဲ့ ကစားပေးခွငျးဖွငျ့ ကောငျးမှနျတဲ့ရလာဒျတှကေို ရရှိလာစမှောပါ။ ယခုလကေ့ငျြ့ခနျးတှမှော သနျမာဖို့အတှကျနဲ့ cardio လကေ့ငျြ့ခနျးတှေ ပေါငျးစပျထားသလို အဓိကအားဖွငျ့ ဝမျးဗိုကျတဝိုကျက ကွှကျသားတှကေို ပဈမှနျထားတာကွောငျ့ အလှဆုံးနဲ့ sexy အကဆြုံး body shade ကို ပိုငျဆိုငျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
အကူပစ်စညျးတှအေနနေဲ့ ၁၀-၁၅ ပေါငျ ဝိတျတုံး (သို့) GYMဘောလုံး တဈခု ယောဂဖြာ နဲ့ ရတေဗူးပဲလိုပါတယျ။ ယခုလကေ့ငျြ့ခနျးတှကေို မစတငျခငျမှာ ထိခိုကျနာကငျြမှုတှေ မဖွဈစဖေို့အတှကျ အကွောလြှော့လကေ့ငျြ့ခနျးတှကေို အရငျဆုံးပွုလုပျဖို့ သတိပေးပါရစေ။ တကယျလို့ လကေ့ငျြ့ခနျးအားလုံး ပွီးသှားတဲ့အခြိနျမှာလညျး အခြို့ cardio လကေ့ငျြ့ခနျးတှကေို ၁၀ မိနဈလောကျ ထပျလုပျပေးနိုငျပါတယျ။ ယခုလိုအပိုပွုလုပျပေးခွငျးဟာ သငျ့ကိုပိုပွီးသနျမာစရေုံသာမက ကယျလိုရီတှကေို ပိုမိုလောငျကြှမျးစနေိုငျတာကွောငျ့ ဝတဲ့သူတှအေတှကျ ပိုပွီးအသုံးဝငျစမှောဖွဈပါတယျ။
တဈဖကျစီကို အကွိမျ နှဈဆယျလောကျ လုပျပေးပါ
2. Push Up Plank
အကွိမျ 25-30 လောကျပွုလုပျပေးပါ
၁ကြော့ကို ၁၀ ကွိမျလောကျလုပျပေးပါ
4. Crunches Knees Up
15 ကွိမျလောကျ ပွုလုပျပေးပါ သငျလုပျနိုငျသေးရငျ နောကျထပျ ၂ ကြော့လောကျပွုလုပျနိုငျပါတယျ
5. Cardio- Jump Rope
အကွိမျ၃၀- ၈၀ သငျလုပျနိုငျစှမျးရှိသလောကျ လုပျပေးနိုငျပါတယျ။
ဗိုက်ချပ်ပြီး ခါးသေးစေဖို့အတွက် ၂၈ ရက်စာ workout plan
ဗိုက်သားချပ်ချပ်ရပ်ရပ်နဲ့ ခါးသေးတာကို ပျိုမေတိုင်းမျှော်လင့်တတ်ကြပါတယ်။ ပျိုမေတို့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေကို ပြည့်ဝစေဖို့အတွက် ထိရောက်ပြီး ပြီးပြည့်စုံတဲ့ workout ပလန်တစ်ခုရှိပါတယ်။ ၂၈ရက်လောက် ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ ကစားပေးခြင်းဖြင့် ကောင်းမွန်တဲ့ရလာဒ်တွေကို ရရှိလာစေမှာပါ။ ယခုလေ့ကျင့်ခန်းတွေမှာ သန်မာဖို့အတွက်နဲ့ cardio လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ပေါင်းစပ်ပါဝင်သလို အဓိကအားဖြင့် ဝမ်းဗိုက်တဝိုက်က ကြွက်သားတွေကို ပစ်မှန်ထားတာကြောင့် အလှဆုံးနဲ့ sexy အကျဆုံး body shade ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကူပစ္စည်းတွေအနေနဲ့ ၁၀-၁၅ ပေါင် ဝိတ်တုံး (သို့) GYMဘောလုံး တစ်ခု ယောဂဖျာ နဲ့ ရေတဗူးပဲလိုပါတယ်။ ယခုလေ့ကျင့်ခန်းတွေကို မစတင်ခင်မှာ ထိခိုက်နာကျင်မှုတွေ မဖြစ်စေဖို့အတွက် အကြောလျှော့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို အရင်ဆုံးပြုလုပ်ဖို့ သတိပေးပါရစေ။ တကယ်လို့ လေ့ကျင့်ခန်းအားလုံး ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလည်း အချို့ cardio လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ၁၀ မိနစ်လောက် ထပ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ယခုလိုအပိုပြုလုပ်ပေးခြင်းဟာ သင့်ကိုပိုပြီးသန်မာစေရုံသာမက ကယ်လိုရီတွေကို ပိုမိုလောင်ကျွမ်းစေနိုင်တာကြောင့် ဝတဲ့သူတွေအတွက် ပိုပြီးအသုံးဝင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဖက်စီကို အကြိမ် နှစ်ဆယ်လောက် လုပ်ပေးပါ
အကြိမ် 25-30 လောက်ပြုလုပ်ပေးပါ
၁ကျော့ကို ၁၀ ကြိမ်လောက်လုပ်ပေးပါ
Crunches Knees Up
15 ကြိမ်လောက် ပြုလုပ်ပေးပါ သင်လုပ်နိုင်သေးရင် နောက်ထပ် ၂ ကျော့လောက်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်
Cardio- Jump Rope
အကြိမ်၃၀- ၈၀ သင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသလောက် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။